မသွားချင်ဘူးလား အနောက်အာဖရိက ။ မောင်သော်တာ
do you want to go to westen-africa
written by မောင်သော်တာ
message မပို့ဘဲ ငါတို့ဆီ ရောက်လာ
မိသားစုတွေ မြို့ရွာတွေဖရိုဖရဲ ကစဉ့်ကရဲ့
ပြေးကြ ပြေးကြ ပြေးကြ
သြော်-- အာဖရိက အာဖရိက
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 8:14 AM
စံ ပ ယ် ညလေးတ စ် ည ၊ မောင် သော် တာ
-------------------------- written by မောင်သော်တာ
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 7:50 AM
"သူလည်းမဟုတ် တခြားသူလည်းမဟုတ်" ၊ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး
★ သာသနာတော်နှစ် ၁၀၀၀ ထက်စောပြီးတော့ မိလိန္ဒမင်းကြီးနှင့်အရှင်နာဂသိန် တို့သာသနာတော်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိလိန္ဒမင်းကြီးကမေးတယ် အရှင်နာဂသိန်ကဖြေတယ်။ ကပ်ကပ်သပ်သပ်မေးခွန်းတွေပါပဲ။မေးခွန်းပေါင်း၃၀၄ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို
ဖြေဆိုချက်နှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းကို မိလိန္ဒပဥှာ လို့ခေါ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာတော်နှစ်၂၅၀၀ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေစုပြီး
သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့တုန်းက ဒီ မိလိန္ဒပဥှာကျမ်းကို ခုဒ္ဒကနိကာယ်ထဲ ထည့်သွင်းပြီး ပိဋကတ်သုံးသွယ် နိကာယ်ငါးဖြာ ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း ၈၄၀၀၀ထဲထည့်ထားကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်လို့ပဲ။
★ မိလိန္ဒမင်းကြီးက ရှင်နာဂသိန်ကိုမေးတယ်။"အရှင်ဘုရား လောကမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ ၁နှစ်ကနေ အသက်၈၀ ထိနေရတယ်ဆိုရင် အနှစ်၈၀သူနေသွားရတယ်။ ၁နှစ်သားတုန်းက အရွယ်နဲ့ အသက်၈၀အရွယ်ကိုယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် တူသလား ကွဲခြားသလား၊ကွဲခြားသွားတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါတစ်ယောက်တည်းလား နှစ်ယောက်လား၊"
တစ်ယောက်တည်းဆိုရင် ဟိုကပေါက်စလေး၊ ဒီကအဘိုးအိုကြီး သွားကျိုးနေပြီ ဆံပင်ဖြူနေပြီ
ဘယ်လိုတစ်ယောက်ထဲလို့ပြောမှာလဲ။ပြောလို့ရသေးရဲ့လား။ ၁နှစ်သားကလေးဓာတ်ပုံနဲ့ အဘိုးကြီးဓာတ်ပုံ ယှဉ်ပြီးတော့ထားလိုက် တစ်ယောက်ထည်းလို့ပြောလို့ရလား။
★ ရှင်နာဂသိန်ကပြန်ဖြေတယ် ''န စ သော၊န စ အညော'' တဲ့။သူဖြေလိုက်တဲ့
စကားလုံးလေးက 'သူလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူး' ။ သူမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင် ဥပမာ ၁နှစ်သားအရွယ်က သွားမကျိုးသေးဘူး ပေါက်စလေး၊အသက်၈၀ ရောက်တဲ့အခါ သွားကျိုးပြီးဆံပင်ဖြူပြီလေ၊။ အဲ့ဒီတော့ တစ်ယောက်ထဲလား နှစ်ယောက်လားဆိုတော့ ၂ယောက်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။
သူလို့လည်းပြောလို့မရဘူး တခြားသူလို့လည်းပြောလို့ မရဘူး။အလေးအနက်စဉ်းစား ဒါကဒဿနည်းနဲ့ဖြေတာ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 7:25 AM
လိ မ်း. . . . . ၊ ရ န် လ င်းေ အာင်
လိ မ်း. . . .
အလိမ်းလိမ်းနဲ့ လှိမ့်ကာလှိမ့်ကာ ......
လုံးသလား ၊ ပြားသလား
ဓါတ်ပေါင်းဖိုကြီးလား ၊ အမှိုက်ပုံးလား !
ကမ္ဘာ ! ! ! ဇရာထောင်းပြီလား!
ခု !...... ကောင်းကင် ဟာ
ငယ်နာမည်လေးမေ့သွားပြီ . . ။ ။
ရ န် လ င်းေ အာင်
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 7:21 AM
"သူလည်းမဟုတ် တခြားသူလည်းမဟုတ်" ၊ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီ...